विकासमा स्थानीय सक्रियता, ठेकेदारले नआँटेको पुल युवाले निर्माण गरे - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
विकासमा स्थानीय सक्रियता, ठेकेदारले नआँटेको पुल युवाले निर्माण गरे
फागुन २७, २०७४ 2301 ऊर्जा खबर/रामेछाप
जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिकाबासीले खैरे र खानी खोलमा पुलको योजना पार्न निकै दौडधुप गरे । गाउँलेको पहलमा योजना पनि पर्यो । स्वीस सहयोगमा सरकारले पुल निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान गर्यो ।
ठेक्का सम्झौता अनुसार ६ महिनाभित्रै दुई पुल निर्माण गर्ने सर्त भयो । तर, ठेकेदारले भौगोलिक विकटता र समयसीमाको कारण देखाई तोकिएको समयभित्र पुल निर्माण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो ।
गौरी पार्वती/आशिष/नीलगिरी जेभीले ८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । निर्माणबाट ठेकेदार पछि हटेपछि गाउँका युवाले ठेकेदारलाई साथ दिए । ठेकेदारको जेखिम स्थानीय युवाले उठाए । झन्डै निर्माण नहुने अवस्थामा पुगेको पक्की पुल युवाको सक्रियतामा चार वर्षमा पूरा भएको छ ।
अहिले उक्त पुल सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय युवाकै सक्रियतामा करिब ५ करोड रुपैयाँमा काम पूरा भएको निर्माण जिम्मेवारी लिएका स्थानीय युवा प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘निर्माण सजिलो थिएन, तर हामीले जोखिम मोलेरै काम सुरु गर्यों,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘दुई वटा पुल सञ्चालनमा ल्याएका छौ, यसले हामीलाई निकै हर्षित बनाएको छ ।’
पुल निर्माणपछि हिउद वर्षा नै सहजरूपमा यातायात सञ्चालन भइरहेको छ । निर्माणमा हिरा श्रेष्ठ, लोकबहादुर श्रेष्ठ, पदम थापामगर लगायतले निर्माणको जोखिम लिएका थिए । उनीहरूलाई भुक्तानी भने साविकको ठेकेदारले नै गरेको थियो ।
अहिले स्थानीयलाई आउजाउ गर्न निकै सजिलो भएको दोरम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह मोक्तानले बताए । ‘सडकको स्तरोन्नती भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयको केन्द्र, सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएका सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।’